अफगानिस्तानमाथि पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com अफगानिस्तानमाथि पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित - खबर प्रवाह
अफगानिस्तानमाथि पाकिस्तानको रोमाञ्चक जित
पाकिस्तानले आइसिसी पुरुष टी–२० विश्वकपअन्तर्गत समूह २ मा अफगानिस्तानमाथि रोमाञ्चक पाँच विकेटको जित दर्ता गरेको छ । लगातार तेस्रो खेलमा जित निकाल्दै ६ अंक बटुलेको पाकिस्तान सेमिफाइनलनजिक पुगेको छ । अफगानिस्तानले दुई खेलबाट दुई अंक जोडेको छ । दुबई रंगशालामा अफगानिस्तानले पहिलो ब्याटिङ गरी २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर एक सय ४७ रनको योगफल खडा गरेको थियो ।
प्रत्युतरमा पाकिस्तानले १९ ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक सय ४८ रन जोड्यो । पाकिस्तानलाई अन्तिम १२ बलमा २४ रन आवश्यक थियो । लक्ष्य पछ्याएको १८औँ ओभरमा आसिफ अली स्ट्राइकमा थिए । अफगानिस्तानबाट करिम जनतले बलिङ गरेका थिए । अलिले १८.१, १८.३, १८.५ र १८.६ ओभरमा छक्का प्रहार गरी पाकिस्तानलाई रोमाञ्चक जित दिलाउन सफल भए । उनी खेलकै म्यान अफ दी म्याच भए ।
अलीले सात बलमा चार छक्काको सहयोगमा २५ रनको नटआउट योगदान दिए । पाकिस्तानको जितमा ओपनर बाबर अजामले अर्धशतकीय इनिङ्सको योगदान दिएका थिए । कप्तान बाबरले ४७ बल सामना गरी ५१ रन जोडे । प्रतियोगितामा उनले यो दोस्रो अर्धशतक बनाएका थिए ।
बाबरले भारतविरुद्धको खेलमा पनि नटआउट अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए । बाबर आउट हुँदा पाकिस्तान १२२–४ को अवस्थामा थियो । ओपनर मोहमद रिजवान (८) लाई गुमाउँदा पाकिस्तान इनिङ्सको २.३ ओभरमा १२–१ को अवस्थामा थियो । त्यसपछि बाबरले जमानसँग दोस्रो विकेटका लागि ६३ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गर्दै टोलीलाई ११.१ ओभरमा ७५–२ को स्थितिमा राखे । जमानसले २५ बलमा दुई चौका र एक छक्का प्रहार गरी ३० रन बनाए ।
यसअघि ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानको सुरुवात कमजोर भयो । शीर्ष चार ब्याट्सम्यानले केवल अनावश्यक स्ट्रोक लगाउँदै आफ्नो विकेट गुमाएका थिए । इनिङ्सको ५.१ ओभरमा अफगानिस्तान ३९–४ को कमजोर अवस्थामा थियो । हजातुल्लाह जाजी (०), मोहमद सेहजाद (८), रहमानुल्लाह गर्बाज (१०) तथा अस्घर फघानी (१५) ले सस्तै रनमा आफ्नो विकेट गुमाएका थिए ।
त्यसपछि कप्तान मोहमद नावी र गल्विदिन नैवले सातौँ विकेटका लागि विस्फोटक ८१ रनको साझेदारी गर्दा अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिएको हो । नावी र नैव नटआउट रहे । नावीले ३२ बलमा पाँच चौका प्रहार गर्दै ३५ रन बनाए । नैवले २५ बलमा चार चौका र एक छक्का प्रहार गरी ३५ रनमा नटआउट रहे ।
बलिङमा पाकिस्तानका लागि उत्कृष्ट फर्ममा रहेका साहिन साह अफ्रिदीले २२ रन खर्चेर एक विकेट लिए । इमाद वासिमले २५ रनमा दुई विकेट हात पारे । हयारिस राउफ, हसन अली तथा सादाव खानले समान एक विकेट हात पारे ।
एमाले महाधिवेशन : उद्घाटनपछि सिधै उम्मेदवारी दर्ता र मतदान प्रक्रिया
केपी ओली र दुर्गा प्रसाईंको सम्बन्ध
ओलीले घातगरेको भन्दै ऐमालेमा गएका पूर्वमाओवादीले गरे विद्रोहको तयारी !
पेट्रोलको मूल्यवृद्धिविरुद्ध कात्तिक ३० गते नेपाल बन्द घोषणा (विज्ञप्तिसहित)
२१ वर्षीय खड्का बने माओवादी वडाध्यक्ष
भूपेन्द्र ह’त्या प्रकरण : फरार रहेका विकास खड्का समातिए
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पक्का भएपछि ‘रिफ्रेस मुड’ मा पोखरेल, ओलीको छनोटमा परेनन् तीन नेता
महाधिवेशन गर्न एमाले चितवन आउनु गौरवको कुरा हो, विकास देखेर जानुहुन्छ : मेयर रेनु दाहाल
भारतमाथि पाकिस्तानको शानदार जीत
टी–२० विश्वकप अन्तरगत सुपर १२ को खेलमा पाकिस्तानले भारतमाथि १० विकेटको शानदार जीत हासिल गरेको छ । भारतले प्रस्तुत गरेको १ सय ५२ रनको लक्ष्य पाकिस्तानले १७.५ ओभरमा पछ्याएको हो । पाकिस्तानको जीतमा ओपनरद्वय मोहमद रिजवान र कप्तान बाबर आजमले अर्धशतकीय पारी खेले । योसँगै विश्वकपमा चिरप्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानविरुद्ध भारतको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । […]
पाकिस्तान क्रिकेट टीमका कप्तानलाई धम्की – ‘भारतसँग हार्‍यौ भने घर आउन दिँदैनौं’
भारत र पाकिस्तानबीच टी२० विश्वकपको खेल अर्को आइतवार दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा हुन लागेको छ । यी दुई टीमको प्रतिस्पर्धा निकै कडा हुने भएकाले प्रशंसकहरूमा धेरै उत्साह छ । पाकिस्तान क्रिकेट टीमका कप्तान बाबर आजमले टी२० विश्वकपमा टीमको प्रदर्शन राम्रो होस् भनी शुभकामना दिन प्रशंसकहरूलाई आग्रह गर्दा धेरैले त शुभकामना दिए । तर राहिल भट […]
नेपालले अमेरिका बिरुद्ध टस हालेर बलिङ गर्दै
आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग टु अन्तर्गत नेपालले दोस्रो सिरिजमा अहिले अमेरिकासँग खेल्दैछ । जसमा अमेरिकाले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको छ । ओमान स्थित अल अमारत क्रिकेट मैदानमा नेपाली टिमले कुनै परिवर्तन गरेको छैन । पीएनजीसँग दोस्रो खेल खेलेको टिम नै रहेको छ । नेपाली टिमका उपकप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरी चोटका कारण यो सिरिज खेल्न […]
चितवनमा कसैले शक्ति प्रदर्शन गर्दैमा प्रचण्डलाई फरक पर्दैन : रेनु दाहाल
ओली जिउदो माछावाट सुकेर सिद्रामा परिणत भए , चुनाव चिन्हले पहिलो बन्ने सपना सपनामै सिमित हुन्छ : मेटमणि चौधरी
राजा बन्न खोजेका केपी ओलीले कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई नारायणी नदिमा लगेर तिलाञ्जली दिए : होम बुढाथोकी
यसकारण ओलीको उपाध्यक्षको सूचीमै चढेनन् वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा गरेका नेम्वाङ भित्री कारण यस्तो
घनश्याम भुसालद्वारा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा
चितवनमा धेरै कार्यकर्ता भेला गरेपछि केपी ओलीलाई आपत !
गैँडाको मस्कट चितवनलाई उपहार
सबै खालका परिवर्तन माओवादीकै एजेन्डा हाे : जनार्दन शर्मा